Neigbourhood Diaries: Fitomboan’isan’ireo olon-tsotra mpitati-baovao avy eny ifotony · Global Voices teny Malagasy
Neigbourhood Diaries: Fitomboan'isan'ireo olon-tsotra mpitati-baovao avy eny ifotony
Voadika ny 11 Septambra 2018 15:38 GMT
Tetikasa 3 taona ny Kalam mba hitady tanora avy amin'ny vondrom-piarahamonina atao an-jorom-bala any Kolkata ho mpanoratra tia zava-baovao sy tia mandinika ary mandranitra ny tsikalakal-pieritreretany ara-kolontsaina. Hetsika ho an'ny tanora izany izay mitaky ny zony ambonin'ny ainy amin'ny alalan'ny fanoratany indray ny tantarany, ny vondrom-piarahamoniny, ary ny tontolo iainany araka ny fomba fijerin'izy ireo azy. Manasongadina ny fanambaràny hoe:
“Tsy maintsy miresaka momba ny tenanay amin'ny teninay manokana izahay, amin'ny fomba fiteninay manokana. Hosoratana ankehitriny ny tononkalo sy ny tantaran'ny fiainanay, ary hanoratra azy ireo izahay. Ary hizara ny tononkalinay sy ny tantaranay amin'ny rehetra. “
Ny voanteny Kalam (ka-lum) dia misy amin'ny fiteny enina [Hindi, Ordò, Bangla, Nepaley, Farsi, Arabo] ary midika hoe penina na pensilihazo na fitaovana hanoratana. Izany no lohateny lavorary ho an'ity fisantaran'andraikitra tsara lazaina amin'ny vondrom-piarahamonina maro fiteny ao Kolkata ity. Efa nanao asa miavaka izy ireo ary namoaka votoaty nampiasa printy mba handrisihana ny fahaiza-mamorona sy ny fanehoan-tena amin'ny poezia sy ny fanoratana amin'ny endriny vaovao.
Fa ankehitriny, afaka manampy ny Kalam mba hahatratra tsara kokoa ny tanjony ny fidirana amin'ny teknolojia an-tserasera.
Nanampy azy ireo ny vatsy kely avy amin'ny Rising Voices mba hananganana ny “Neighborhood Diaries”, mampiofana ireo tanora sahirana mipetraka any ambanivohitr'i Kolkata mba ho lasa olom-pirenena tia mitati-baovao. Hitarika atrikasa amin'ny fomba fisainana tia mitsikera, fanoratan-gazety, haino aman-jery sy teknolojiam-pampitam-baovao toy ny bilaogy, fandraketam-peo (podcasts) sns izy ireo. Araka ny tolo-kevitry ny tetikasa hoe:
“Hahasoa ny vondrom-piarahamonina kinendriny ny ND- dia ireo mponina any amin'ny faritra mahantra (ankizy mpiasa, ankizy mpivaro-tena, ary ireo tanora mianatra kely fidiram-bola) – amin'ny alalan'ny fanentanana azy ireo hisaintsaina sy hanoratra momba ny tantarany manokana sy ny fiaraha-monina, ny olana sy ny tantara, mba ho ampahany manan-danja sy mavitrika amin'ny tontolon'ny fiarahamonina ara-tsosialy sy ara-kolontsaina ao an-drenivohitr'i India ary mamoaka azy ireo amin'ny bilaogy azon'izao tontolo izao vakiana. Ity fandaharana sy fampiharana ity dia hampiroborobo ny fahamendrehana eo anivon'ny fiarahamonina izay matetika heverina ho tsy manan-kery, tsy mahay mamaky teny, ary mahantra ara-kolontsaina. “
Fantaro ireo olona ao ambadiky ny Neighborhood Diaries (sy Kalam): Bishan Sammadar, Harleen, Sahar Romani, Rohini, ary Maitrayee (sary etsy ambony, ankavia miankavanana).
Ny ekipan'ny mpanabe dia ahitana an'i Urbi Bhadhuri sy Bina Dalui izay nofidiana tao anatin'ny dinga-pifantenana naharitra ela.
Faly izahay manambara fa taorian'ny dingana lavabe tamin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa, nanomboka tamin'ny ekipa, ka hatramin'ny mpiara-miombon'antoka ary ny mpifanolo-bodirindrina, dia nanomboka ny andian'ny atrikasany 15 herinandro ihany ny Neighborhood Diairies. Nanomboka ny 26 novambra 2007 ny atrikasa niarahana niasa tamin'ny FTMF ao an-toerana, Sanlaap, izay natao tao amin'ny lisea Bow Bazaar tao Kolkata. Tanora 15 tao amin'ny faritra nofantenin'ny Sanlaap ireo mpandray anjara, ny Sanlaap dia fikambanana tsy mitady tombontsoa izay manampy ireo ankizy vavy iharan'ny herisetra ara-nofo any amin'ny faritra mena any Kolkata, Paraganas 24 Atsimo sy Avaratra miaraka amin'ireo tanora mpialokaloka sy ny fanazarana talenta. Manana programa fampandrosoana ho an'ny ankizy izy ao amin'ny faritra mena ao Kolkata ihany koa izy sy vondrona fanohanana ho an'ny vehivavy mpivaro-tena.
Vakio ato ny momba ireo mpandray anjara, ireo mpanao gazetin'ny Bow Bazaar, ny vondrona mavitrika ahitana ireo zatovo tsy mitsaha-mitombo hatrany izay manana fanahy sy hafanam-po lehibe.
Nametraka andiam-panontaniana ho an'ireo mpandray anjara ny fivoriana voalohany:
“Tahaka ny nahitantsika ireo tantara sandoka/nosarantsarahana/nanirikiry momba ireo faritra samihafa, ahoana ny hevitrao mikasika ny heverin'ny olona na eritreretin'ny olona mikasika ny faritrao manokana? Inona ireo fitsarana an-tendrony asarona ny manodidina anao? “
“Heverinao ve fa zava-dehibe ny milaza ny tantaran'ity faritra ity amin'ny maha ao anatiny sy maha-mponina anao ao aminy?”
Namaly ireo mpandray anjara hoe:
Nitokelaka ny vondrona tamin'ny hoe ireo “olana” no zavatra voalohany nanontanian'ny hafa azy ireo momba ny Bow Bazaar avy amin'ireo olona ivelany satria monina ao amin'ny faritra mena izy ireo. Ny fehin-kevitra tamin'ity fivoriana fampahafantarana no nahatonga ireo mpandray anjara hahatsiaro ny tantara adino sy tsy noraharahian'ny faritra misy azy ireo ka nanoratany tantara fohy/famantarana. Ireo tantara dia ahitana tranga fandroahana ireo mpifanolobodirindrina taloha, ny fitiavan'ny tanora ao an-damosin'ny chai (dite), tovovavy iray ao an-tanàna izay voatery manao asa firaisana ara-nofo, rahalahy be herim-po izay mandoa ny saram-pianaran'ny anabaviny ary mandefa azy hiverina an-tsekoly, ary fifaninanana baolina kitra tsy nahomby noho ny ratra teo amin'ny ranjo.
Nahitana famenoana ny mombamomba ireo mpandray anjara, famoronana sarintany manokan'izy ireo sy ny Bow Bazaar ny andro faharoan'ny Bow Bazaar.
Ny andro fahatelo dia nampidirana fomba fijery sy ireo retsika fampahatsiahivana (feo, fofona, hazavana, kasika) an'ny Bow Bazaar teo amin'ireo mpandray anjara. Nangatahana ihany koa izy ireo mba hisafidy mari-pamantarana ny toerana ary hamaritra ny antony maha zava-dehibe izany amin'izy ireo.
Tamin'ny fiafaran'ny andro fahatelo, nahavita namorona marika karatra paositra mahaliana tahaka ity iray ity ny fivoriana naharitra telo andro:
Bow Bazaar dia midika hoe…
Ny feon'ny resadresaka avy eny an-dalambe mankany an-tokantrano,
Ny fofon'ny alikaola,
Bow Bazaar dia midika ho fahitana olona mamo, mianjera amin'ny tohatra.
Bow Bazaar dia midika fahatsapana hatsiatsiaka eo amin'ny tafon'ny tranoko.
Avy amin'i Pooja Dolui, 13 taona
Miangavy anao mba hijerijery ny Diaries Blog (na manoratra anarana ao aminy) mba hahazoana fanampim-baovao avy amin'ity tetikasa miavaka ity.